R940 Crawler Excavator Avy any Libherr | FANASITRANA ACE
France R&D sy ny foibe famokarana vao nahavita milina vaovao –R940 Crawler Excavator izay vokatra farany ho an'ny andiany R 944C
Tombontsoa amin'ny traikefa manankarena avy amin'ny Libherr, ny milina vaovao dia manana fahaiza-miasa tsara, ary izany dia mety hanangana fenitra vaovao ho an'ny mpitrandraka ho avy. Satria ity milina ity dia afaka manao lalao mifanaraka amin'ny tontolo iainana bebe kokoa. Ary io masinina io koa manampy ny banga amin'ny andiany R950 sy R960 dia mety amin'ny toerana fandringanana bebe kokoa.
Ity akanjo milina vaovao ity ho an'ny emission standard EU-5. Ary ny tahan'ny vokatra dia mety hahatratra 200KW, miaraka amin'izay koa ny DOC, SCR sytem, ​​DPF ary esory ny valizy EGR. Ireo fitaovana rehetra ireo dia afaka manao ny fitsitsiana solika sy miaro ny motera. Ankoatr'izay, afaka manolotra ny kinova Tier 4 Final izy io. Farany, Libherr dia manome ny motera mifanaraka amin'ny tsena manokana.
Ity misy ampahany iray manan-danja LDC, Miaraka amin'ireo kojakoja fiarovana fiarovana, ny mpamily dia mety hahafantatra ny toerana misy ny masinina sy ny toeran'ny dozer, raha misy loza mety hitranga dia handray ny hafatra ampahafantarin'ny mpamily azy ny LDC.
Mandritra izany fotoana izany ny cabine Driver dia manao fanitsiana bebe kokoa toy ny chassis Hydraulika, ary ny lovia Counterweight azo esorina. Ny mpamily koa dia afaka mampiasa ny compresseur Air hamoahana ny rivotra madio ao anaty trano.
Ity milina vaovao ity dia mety hanangana ny fenitra ho an'ny Demolition Excavator.